News 18 Nepal || आज युरोकपमा तीन खेल, क-कसको भिडन्त ?
एजेन्सी । युरोकप फुटबलमा आज पनि तीन खेल हुँदैछ । समूह चरण अन्तर्गत आज समूह ‘सी’ को दुई खेल र समूह ‘बी’ को एक खेल हुनेछ । आज हुने पहिलो खेलमा युक्रेन र नर्थ म्यासेडोनियाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । खेल साँझ ६:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
युक्रेन र म्यासेडोनिया दुबै टोली पहिलो जित निकाल्ने योजनामा छन् । पहिलो खेलमा युक्रेन नेदरल्यान्ड्ससँग ३-२ गोलले पराजित भएको थियो भने नर्थ म्यासेडोनिया अष्ट्रियासँग ३-१ ले पराजित भएको थियो ।
आजै हुने दोस्रो खेलमा बेल्जियम र डेनमार्कबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । समूह ‘बी’ बेल्जियम र डेनमार्कबीचको खेल राति ९:४५ बजे हुनेछ । बेल्जियम आज लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहँदा डेनमार्क पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ ।
पहिलो खेलमा बेल्जियमले रुसलाई ३-० ले हराएको थियो भने डेनमार्क फिनल्याण्डसँग १-० ले पराजित भएको थियो । आजको तेस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र अष्ट्रियाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । समूह ‘सी’ मा रहेका दुई टिमबीचको खेल राति १२:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
नेदरल्यान्ड्स र अष्ट्रिया दुबै लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा छन् । समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको नेदरल्यान्ड्सले पहिलो खेलमा युक्रेनलाई ३-२ ले हराएको थियो । पहिलो खेलमा अष्ट्रियाले नर्थ म्यासेडोनियालाई ३-१ ले हराएको थियो ।
शाहिद अफ्रिदीले ईपीएल क्रिकेट खेल्ने
टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका ५ खेलाडी : कुन खेलाडीको प्रतिस्पर्धा कुन दिन ?
आइसीसीको टी-२० वरियतामा नेपालका कुन खेलाडी कति औं स्थानमा ?
नयाँ फर्म्याटको प्रतियोगिता ‘द हन्ड्रेड’ सन्दीपले नखेल्ने
नेपालमा विदेशी लिग सञ्चालन हुन लागेकै हो त ?